Wasiirka Maaliyadda Oo Lacag Badan Ku Bixiyay Mashruuc Dhaawac Ku Ah Dawladnimada Oo Lagu Tartansiinayo Golaha Wasiirrada – somalilandtoday.com
Wasiirka Maaliyadda Oo Lacag Badan Ku Bixiyay Mashruuc Dhaawac Ku Ah Dawladnimada Oo Lagu Tartansiinayo Golaha Wasiirrada
(SLT-Hargeysa)-Wasiirka wasaaradda Maaliyadda Somaliland Md Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa lacago badan ku bixiyay mashruuc lagu tartansiinayo xubnaha golaha wasiirrada xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Mashruucan ayaa waxa wada oo ku hawlan koox dhallinyarro ah oo Website u sameeyay in looga coddeeyo wasiirrada ugu waxqabadka iyo dadaalka badan xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi oo mashruucan soo abaabulay ayaa la sheegay in uu doonayo in kaalmaha ugu horeeyo laga galiyo tartankan.
Arritan ayaa dood badan ka dhalisay baraha bulshadu ku xidhiidho iyada oo dad badan ay sheegeen inay tahay markii ugu horraysay taariikhda dunida ee waxqabad iyo dadaal ay sameeyaan golle wasiirro lagu kala saaro nidaam noocan ah oo aan ku dhisnayn cilmi.
Mashruucan ayaa sidoo kale waxa ay dad qaar u arkaan in uu ceeb ku yahay golaha wasiirrada Somaliland oo qaarkood dhaqaale badan ku bixiyeen inay meel fiican ka galaan tartankan aan la ogay garsoorkiisa iyo cid maamulaysa.
Arrintan ayaa sidoo kale Dadka siyaasadda fallan-qeeya waxa ay u arkaan inay tahay tallaabo dhaawacaysa golaha wasiirrada iyo hoggaaminta Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Golaha wakiillada iyo hanti dhawrka guud ayay waajib ku tahaya inay qiimeeyaan golaha wasiirrada waxqabadkooda iyo dadaalkooda marka la eegayo nidaamka dawliga ah ee dunida.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa l eego doonaa sidda uu ugu falceliyo tallaabadan dhaawaca ku ah xukuumaddiisa.